umgibeli Okokuqala sedan "Vaz-2170-Priora" wazalwa ngo-2007. Eqinisweni, umkhiqizo omusha inekhophi kangcono lowo "amashumi" edume (VAZ-2110), owabekwa kusukela maphakathi nawo-1990. Okusanda (noma kunalokho, ekupheleni kuka-September 2013) iVolga imoto wethulwa emphakathini omusha, wesibili ilandelana, isizukulwane imoto "Vaz-2170". Ngokusho enkampanini, yena olusha "Harmony" lizoqhubeka ukudayiswa ngonyaka ozayo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi lezi zinguquko esivuna wakhe uhambe njengoba babenjalo afune ukuvelela? Asivume.
Entsha "Ngaphambi 2» 2013: izithombe kanye ekuhlaziyeni ukubukeka kwangaphandle
Uma ubheka izithombe izinto ezintsha, izinguquko eziphawulekayo cishe umzimba waso kungabonwa. Design imoto namanje okusikhumbuza ukubukeka izimoto oneminyaka engu-15 ubudala e-Europe. Uma babheke kabanzi umklamo sedan, ungabona eningi imininingwane ezithakazelisayo. "Priora" phambi entsha atholwe emini ukugijima izibani futhi entsha zamanga kurediyetha Izinsimbi. Headlamp ukukhanya main kanye hood ziyafana, kodwa akunjalo ngezihluthu bumper. Design Its isibe nokulula kakhudlwana futhi sokunciphisa umoya lapho zindiza. Expanded air eyanele - sesiye voluminous ngaphezulu, futhi ohlangothini umshini ngamunye itholakala kahle izibani "isibhamu" inkungu. Ezinhlangothini ibekwe entsha izibuko. Manje, bona zipendwe umbala emzimbeni futhi kufanele ukuphinda amajika. Ngo ngemuva "Priora" futhi uye washintsha entsha eziningana, kodwa akukho okufana emikhulu, kokubili phambi - avela LED izibani ukubopha futhi kancane Ushintshe bumper. Ezinye izindaba zika- umzimba imoto ayizange ithuthuke. Izazi zilinganisela ukuthi ukuma imoto namanje emuva kulesi sikhathi samanje, kwenzeka naphezu restyling.
Salon "Vaz-Priora" imoto
Entsha "Harmony" 2170 imodeli ishintshile hhayi ngaphandle kuphela kodwa futhi ngaphakathi. By the way, umklamo ingaphakathi isizukulwane sesibili "Priora" ukwenza Abaklami Italian esinikeza ithemba ngelungiselelo obunobunye kanye nomklamo yonke imininingwane namaphakathi nezwe. Kubuka design wezangaphakathi, singasho ukuthi amaNtaliyane abhekana ngayo umsebenzi wabo ngomdlandla.
Saloon imoto yesimanje, futhi sisihle ngempela. Plastic isibe mnandi ngokwengeziwe uma uyithinta (a rarity ngoba Vaz), iphaneli sensimbi akudali ukungakhululeki ngenkathi ufunda ukusebenza ngokuziphatha nginesikali, amasondo ayo is sizikhandle esifanelana esandleni sakho. By the way, ngaphakathi console isikhungo "Priora" usezuze elihle ipuleti aluminium entsha.
Kulo nyaka olandelayo, umenzi lizoyinika umkhiqizo omusha emazingeni amathathu ngombala. Lokhu "ejwayelekile", "okuvamile" futhi "okunethezeka". Owokuqala uyoba unomsebenzi 81-amahhashi uphethiloli injini kanye ne-transmission ibhukwana. Izindleko kuzoba ruble ecishe ibe yizinkulungwane 335. Futhi kule "isizinda" kuhlanganisa amawindi phambi kagesi, central locking nokukodwa airbag. Intengo "Okubaluleke kakhulu" entsha ngo-2013 ukucushwa eqolo ifinyelela ruble ayizigidi 430. Kuyoba Ziningi "amawijethi" electronic, kuhlanganise air conditioning, kanye ngaphansi hood, kuba 98-hp, 16 valve injini. Transmission, ngeshwa, hhayi okuzenzakalelayo (nomkhiqizi enjalo ongakabi athuthukile), kanye mechanical 5 izinyathelo.
Ukulungisa uhlelo iyunithi ikhaya